Amachaphaza amazambane kaRyazan anikezwa iChina ne-Argentina - Umagazini wamazambane
Amachaphaza amazambane avela eRyazan alethwa eChina naseArgentina
Ukwethulwa kwezindlela zebhayoloji akuyona imfashini, kepha kuyimfuneko yezikhathi.
Ukudla okunomsoco okuyinkimbinkimbi kuyisihluthulelo sokuvuna okunempilo.
Ukukhula kwamazambane esifundeni saseNovosibirsk
Kuyekhulunyaka le-FGBNU "FITZ POTATO EBIZWA NGEMUVA A.G. LORKH"
Ukuvuna, amanani kanye nezinhlelo zesikhathi esizayo
Isikhathi sebhizinisi! Uhlelo lwebhizinisi lushicilelwe kuwebhusayithi yombukiso ye-AGROSALON
NgoMgqibelo, Septhemba 26, 2020
в Ukuphinda usebenzise kabusha, Izindaba zesifunda
Isithombe ngu-Alexander Abramov
LinkedInYabelana ku-FacebookYabelana ku-Twitter
UMbusi wesiFunda saseRyazan Nikolay Lyubimov uvakashele iMiloslavsky Food Factory JSC, ibhizinisi lokugcina nokulungiswa kwamazambane.
Njengamanje, lesi sitshalo sikhiqiza izimbiza zamazambane ezinemikhiqizo yemvelo kanye nemikhiqizo yomiswe iqhwa. Lama-flakes ajwayelekile kumthengi njengamazambane abunjiwe ngokushesha. Ezinyangeni eziyisithupha zalo nyaka, kukhiqizwe amathani angama-2059 lapha, okulinganiselwa kumaphesenti ayi-122 uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka owedlule.
Isitshalo seSolanuz ukuphela kwebhizinisi e-Asia Ephakathi, eligxile ekukhiqizeni imikhiqizo eqediwe evela kumazambane
I-PC "Miloslavsky" iqale ukucubungula amazambane esitshalo esisha
Ngaphezulu kwamathani ayizinkulungwane ezingama-64 amazambane acutshungulwa esifundeni saseMoscow
Osomabhizinisi abasezingeni eliphakeme aba-5 baseBelarusian abathathe isinqumo sokungeza imikhiqizo yokudla ezimpahleni zabo eziphambili
Bangaphezu kwama-50 amapulazi aseRussia akhulisa amazambane ePepsiCo kulo nyaka
E-Ukraine, bafuna ukwakha isitshalo sokukhiqiza ama-fries aseFrance
Imaketha wokupheka amazambane eRussia ngonyaka we-2019-2020
E-Russia, angaqala ukukhiqiza ama-chips Estrella
Amahektha ayinkulungwane ayi-11 womhlaba ahlelelwe ukungena ekujikelezweni kwezolimo ezindaweni ezingaphansi komhlaba eminyakeni emibili
I-Irrico Group yokuhlinzeka ngamazambane wama-chip ka-Lay
Isitshalo sokulungisa ukudla sinikeza imikhiqizo yaso ezifundeni ezahlukahlukene zaseRussia nakwamanye amazwe: IPoland, iRomania, iPortugal, iArgentina, i-Itali, iChile, iChina, i-Israyeli nabanye. Cishe amaphesenti angama-50 evolumu yonke yemikhiqizo eyenziwe
Ngokusho kukaValery Lashukov, umphathi weKuntsevo Group of Companies (okubandakanya lesi sitshalo), namuhla kungenye yamabhizinisi amakhulu esifundeni iMiloslavsky. Okunye okubalulekile: inkampani ihlinzeka ngemisebenzi kubahlali abayi-100 bendawo yayo.
Source: Ryazan vedomosti
Tags: amazambane izikebheukucubungula amazambaneI-PC "Miloslavsky"Isifunda saseRyazan